AnyDesk: safidy tsara hafa amin'ny fitantanana birao lavitra | Avy amin'ny Linux
AnyDesk: safidy tsara indrindra hitantanana desktops lavitra
AnyDesk dia fifandimbiasam-pitaovana tsara indrindra amin'ny fitantanana birao lavitra, izay ao amin'ny kinova vaovao 5.0.0 ankehitriny. Noho izany, mamela antsika hifandray amin'ny solosaina lavitra isika, na amin'ny faran'ny birao na trano tsotra, na amin'ny toerana lavitra, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. AnyDesk dia afaka manome fifandraisana birao lavitra azo antoka sy azo antoka amin'ireo mpampiasa azy, na mpampiasa an-trano izany na ireo matihanina amin'ny IT rehefa mandeha.
Ity vahaolana rindrambaiko ity dia misintona maimaim-poana, fanombatombanana maimaimpoana ary fampiasana manokana. Na izany aza, manana ny fahafahany mandoa izany izy hampitombo ny tombony azony. Tena soso-kevitra be dia be avy amin'ny vondron'olona mpampiasa manerantany izy io, satria manana endri-javatra tsara (fampiasa sy fiasa) izy io, nahatonga azy ho mpirotsaka hofidina hanolo ny fampiharana GNU / Linux maimaimpoana sy tiana raha tiana. zavatra nandroso kely kokoa.
2.2 toerana misy anao
3 Sintomy sy apetraka
AnyDesk dia fampiharana noforonin'ny Orinasa tsy miankina antsoina hoe «AnyDesk Software GmbH»Izay natsangana tany Alemana tamin'ny 2014. Being AnyDesk, ilay rindrambaiko fidirana amin'ny birao lavitra manokana, vokatra alaina hatramin'ny mpampiasa mihoatra ny 150 tapitrisa manerantany, miaraka amin'ny salanisa 5 tapitrisa isam-bolana alaina ankehitriny.
Ny ankamaroan'ity fahombiazana ity dia noho ny fisian'izay rindrambaiko AnyDesk izay miorina amin'ny kaody manokana fananany, antsoina hoe "DeskRT", izay mamela ny fiaraha-miasa na dia tsy misy latency aza, na akaiky na lavitra toy inona ny solosaina mitantana lavitra.
Ao amin'ny kinova ankehitriny 5.0.0, daty famoahana 24 / 04 / 2019, misy an'ity vaovao manaraka ity:
Fahaiza-manao vaovao amin'ny famindrana rakitra: amin'ny alàlan'ny iFampiharana ny fanovana eo amin'ny interface interface mba ahafahana mamindra rakitra eo amin'ny samy mpanjifa.
Fahaizana mahita tena: for avelao ny fikarohana eo anelanelan'ny solo-sainan'ny AnyDesk.
Fampiharana ny fepetra fiarovana: mampiasa «Tunneling TCP »amin'ny fifandraisana lavitra efa niorina.
Fanamboarana bibikely vaovao: Amin'ny alàlan'ny fanamboarana na famahana bibikely taloha sy vaovao maro, dia ampitomboinao ny fitoniana, ny fampiasana azy ary ny fahombiazan'ny fampiharana.
Sary masina vaovao: Kitapo misy ireo kisary anatiny nohavaozina ao amin'ny interface interface.
toerana misy anao
Performance: Ny codec manana sy manan-danja ampiasaina, DeskRT, dia mahatonga an'i AnyDesk ho fampiharana afaka mamehy sy mamindra angona sary eo anelanelan'ny solosaina, amin'ny ambaratonga mahomby indrindra, azo ampitahaina amin'ny vokatra avo lenta. Izy io dia manatanteraka ny asany amin'ny alàlan'ny olana na fahasarotana kely indrindra, miaraka amin'ny bandwidth 100 KB / Sec fotsiny. Inona no mahatonga ny AnyDesk ho lozisialy mety hitantanana ny birao lavitra amin'ny toerana misy fifandraisana Internet tsy dia tsara, hahatratra sary mihetsika amin'ny 60 FPS fotsiny amin'ny tambajotra eo an-toerana sy ny ankamaroan'ny fifandraisana Internet.
fiarovana: Ny teknolojia TLS 1.2 ampiasaina, dia mahavita miaro izay solo-sainanao amin'ny fidirana tsy nahazoana alalana. Koa satria ny "RSA 2048" dia ampiharina amin'ny fifandraisana, izany hoe 2048-bit valinteny fifanakalozana asymmetrika, hanamarinana izay fifandraisana. Ankoatr'izay, izay mifehy solosaina dia afaka mahazo fidirana ao aminy amin'ny alàlan'ny birao misy lisitra fotsy misy fifandraisana matoky. Io dia miantoka fa ny olona nahazo alalana ihany no afaka mametraka fifandraisana.
manovaova: AnyDesk dia afaka miditra amin'ny solosaina rehetra na lavitra na akaiky inona izany, miaraka amin'ny fanamorana azo ekena. Izy io koa dia mamela ny fandefasana programa amin'ny mpanjifa tantanana, fidirana tsy misy fanaraha-maso, miaraka amin'ny fampiharana ny teny miafina fotsiny. Ary ny endri-javatra misy sehatra maro dia midika fa azo ampiasaina amin'ny sehatra tianao indrindra izy io, na inona na inona Linux, Windows, Mac OS, FreeBSD, iOS na Android. Ho fanampin'izany, AnyDesk dia mora, ny misintona (+/- 5MB) ary tsy mandray toerana be amin'ny Hard Drive, ary kely noho ireo mitovy aminy.
fitantanan-draharaha: AnyDesk dia ahafahanao manara-maso ny fifandraisana sy ny fifandraisany amin'ny alàlan'ny fampiasana kalandrie namboarina, manara-maso izay an-tserasera nefa tsy mila mifandray. Izy io koa dia mamela ny fampiasana solonanarana default, antsoina hoe "AnyDesk ID" izay mifandraika amin'ilay solonanarana manokana hanoritana ny solosaina tantanana, izay anampiana sary famantarana koa, mba hanamorana ny fidirana sy ny fampifanarahana amin'ny fampiasana an'ny mari-pamantarana marika.
Famoahana: AnyDesk dia azo ampiasaina maimaim-poana, saingy mampiasa fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa izay mandrakotra kinova rehetra amin'ny ho avy, nefa tsy miteraka fiampangana ho fanavaozana. Mampifanaraka ny kinova rehetra ao aminy.
Sintomy sy apetraka
AnyDesk ao amin'ny kinova 5.0.0 misy azy ankehitriny ary amin'ny tranga misy anay, ao amin'ny Linux, manana safidy maromaro hametrahana izy. Na izany aza, hampidininay ny fonosana ho an'ny DEBIAN / Ubuntu / Mint izay manana anarana ankehitriny ao amin'ny kinova 64 Bit, ireto manaraka ireto: "Anydesk_5.0.0-1_amd64.deb". Izay milanja 4,3 MB ihany ihany koa.
Na izany aza, satria sehatra marobe amin'ny Operating Systems hafa izy io dia manana ireto kinova, habe ary endrika manaraka ireto:
Windows, v5.0.5 (2,8 MB): fisie .exe
MacOS, v4.3.0 (3,8 MB): fisie .dmg
Android, v5.0.2 (7,6 MB): fisie .apk
iOS, v2.7.3 (6,1 MB): rakitra .ipa
FreeBSD, v2.9.1 (2,1 MB): fisie .tar.gz
Raspberry Pi, v2.9.4 (2,1 MB): fisie .deb
Na izany aza, ao amin'ny safidy ho an'ny Linux ny safidy rehetra aseho amin'ity sary manaraka ity dia misy:
Aorian'ny fametrahana ny fonosana "anydesk_5.0.0-1_amd64.deb" amin'ny alàlan'ny endrika efa fanta-daza, ho an'ny endrika fonosana voalaza, afaka mihazakazaka ny fampiharana izahay, avy amin'ny menio programa an'ny GNU / Linux anay ary miroso amin'ny fanaingoana sy ny fitsapana azy. Izaho manokana dia nampiasa azy betsaka tamin'ny Debian sy Ubuntu mifototra amin'ny Operating Systems tsy misy olana.
Amin'ny ankapobeny aorian'ny fametrahana azy dia vonona hampiasa izy io, satria tamin'ny voalohany dia namboarina mandeha ho azy miaraka amina "AnyDesk ID" sy Username (ekipa) tokana. Ary hijanona ihany izany raha ilaina ny manamboatra singa toa:
Password miafina fidirana lavitra
Ovay ny Username amin'ny AnyDesk ID ao amin'ny Interface
Amboary ny masontsivana tambajotra raha toa ka misy ny proxy
Amboary ny masontsivana momba ny kalitaon'ny fifindrana amin'ireo tambajotra ambany fantsom-pifandraisana
AnyDesk dia tsy rindrambaiko mora entina misintona, mametraka, manamboatra ary mampiasa azy ihany koa, fa manana fahombiazana tsara sy fitoniana tena tsara koa. amin'ny sehatra samihafa an'ny Operating Systems indrindra ao amin'ny GNU / Linux. Ho fanampin'ny fanomezana ambaratonga tsara ny filaminana sy ny fiainana manokana ho an'ny fifandraisana lavitra vita.
Raha izaho manokana dia nampiasa ny ankamaroan'ny safidy GNU / Linux tera-tany malalaka sy malalaka aho, saingy rehefa mila zavatra matanjaka kokoa, azo ampiasaina sy azo itokisana ireo mpampiasa na mpanjifa, Tena amporisihiko izy io ho fifaninanana ho an'ireo fampiharana miaraka amina endri-javatra mitovy amin'ny TeamViewer.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » AnyDesk: safidy tsara indrindra hitantanana desktops lavitra
Basilio hernandez dia hoy izy:
Nampiasako azy io nandritra ny fotoana kelikely ary tena mandaitra afa-tsy ny fanelingelenana manelingelina loatra, tsy mamela anao hihazakazaka ny anjara asan'ny mpitantana izay tena ilaina tokoa rehefa te hanamboatra zavatra lavitra ianao, antenaina fa ho voavaha amin'ity kinova ity izany.
Valiny tamin'i Basilio Hernandez
Tsy afaka nilaza taminao aho, tsy mila manao zavatra mandroso aminy aho. Araho fotsiny.
Joselp dia hoy izy:
Ny fotoana farany nanandramako azy dia tsy hitako ny safidy tsy hanombohany amin'ny rafitra. Manantena aho fa tamin'ny fanavaozana farany dia nesorin'izy ireo io safidy io hahafahany manamboatra azy io.
Mamaly an'i joselp
Tsy mandeha aho amin'ny alàlan'ny safidy Linux antsoina hoe session ary manomboka. Eo no hamafana ny entana ao am-piandohana.
guilds dia hoy izy:
hanaiky izany isika, fa manontany aho: «mila zavatra matanjaka kokoa, azo ampiasaina sy azo itokisana kokoa» ny mpanjifa »angamba tsy azo atokisana ireo rindranasan'ny linux tompon-tany?
Mamaly amin'ny guilds
Tsy atokisana amin'ny resaka fahatokisana (filaminana sy tsiambaratelo) fa amin'ny resaka fandrosoana mandroso (stable + functions). Saingy heveriko fa marina ianao, mety tsy izany no teny mety tamin'izany ...
OnionShare: Famindrana rakitra amin'ny alàlan'ny tambajotra TOR